Semalt: Iimfihlo zeHackers Abafuni Ukuzi
Inkalo yezoLwazi neTeknoloji iza neendidi ezahlukeneyo. Njengokuba,amaninzi amashishini athatha indlela ye-e-commerce, enye equka ukubeka iiwebhusayithi kunye neeblogi ukuze zenze amandla amashishini abo okuthengisa.Kukho izixhobo ezininzi ezitsha, ezikhokela abantu ngeenkqubo eziyinkimbinkimbi zokudala iiwebhusayithi. Ngomlinganiselo ofanayo, izixhobo kunyeUkusetyenziswa kwe-hacker kuqhubela phambili njengoko bephucula kwaye bebhetele. Hackers benza away iningi ulwazi lomuntu siqu kanyeolunye ulwazi, olunokubaluleka.
Bangayikhawula i-website kwaye bayichitha ngolwazi olunjengekhadi lesikweletuulwazi kunye nolunye ulwazi oluncedo. Ngenxa yoko, abantu bafanele baqaphele oku kuhlaselwa kunye nezinye izinto ezinokwenzekaumonakalo unako ukwenza. Abantu abaninzi bayazibuza indlela abagcugayo abaqhuba ngayo ukuxhaphaza kwabo ngezinga eliphezulu lokugqwesa. Ngomnye ukuphepha abahlaselikunye nokuzama ukuqhubeka nokuzama ukukhawuleza, kukho isidingo sokuqonda indlela abahlaseli baxhamla ngayo iiwebhusayithi.
Ezinye zezinto ezixhaphakileyo kunye nezindlela zikho kwesi sikhokelo, esilungiselelweUFrank Abagnale, uMphathi weNtengo kaMthengi iSemalt IiNkonzo zeDivithali.
Olu hlaselo lubandakanya ukuhlaselwa kwiiwebhusayithi ezingenakulungiswa ukufundazabo database. Le ngqungquthela ithatha ulwazi lomntu siqu ezifana namakhadi-mboleko, amagama abasebenzisi kunye namaphasiwedi. I-SQL Injection yenzeka isebenzisa okhethekileyoizixhobo, ezinokufunda uhlobo lwesiseko sedata kunye nolwazi olufanelekileyo lwabaxumi. Le ndlela ingakwazi ukwenza idatha yokuhlela i-hacker, ulayisheokanye ukhupha iifayile ezivela kwisiseko sedatha ngokufikelela kude.
Olu hlaselo lubandakanya ukusetyenziswa kwezixhobo zokufaka umbhalolewebhu. Olu hlaselo lubandakanya ukwenza ukuba ixhoba licofe iqhosha elichaphazelayo okanye ifayile. Ngenxa yoko, iskripthi sibamba isiphequluli. I hackerufumana ufikelelo olufana ne-cache, kunye namaphasiwedi kwiphina iwebhusayithi. Unokuthintela ukuhlaselwa ngokubethelwa ngolwazi ngokunjalonjengokuzisa inkqubo yesibini yokuchonga njengoko ulwazi ludlula phakathi komsebenzisi kunye nomncedisi.
Lawa mawebhusayithi e-clone, angakhohlisa umsebenzisi ukuba anikeukungena kwedatha kwiphepha lokukhohlisa. Ingcaciso engumsebenzisi ebekayo inokubaluleka kakhulu kwiinkqubo zokhuseleko lweedatha. Ukuhlaselwa kobuqhetseba,umsebenzisi ufumana idatha ebalulekileyo njengephasiwedi kunye nokufumana ukungena kwiwebhusayithi. Ezinye iziganeko zezi hlaselo zikhokelela kwi-de-indexation ye-akwiwebhusayithi kwiinjini zophando ezidala ukulahleka okukhulu kwinkampani.
Ukuhlaselwa kwaphakathi kwaMntu.
I-intanethi iyonke malunga nokutshintsha idatha. Kwiwebhusayithi, aUmsebenzisi uthumela kwaye uyayifumana idatha esuka kumncedisi okanye kwi-database. Njengoko idatha iyahamba, kukho ubuncipheko, obwenzeka nakweyiphi na isigabainkqubo. Umntu woMphakathi uhlasele iithagethi ngokuba le nkcazelo, enokubakhokelela ekulahlekelweni okukhulu kolwazi lwenkampani.
Abahlaseli bachitha iidizi zemali ngokukhwabanisa kunye nezinye iindlela. Bangela ezininziilahleko ezikhoyo kunye nokubangela inkxwaleko kunye neentlungu kumaxhoba abo. Zininzi iindlela zokuhlaselwa kwee-hack eziphumelelayo ngenxa yezinto ezininzi ezikhuselekileyozininzi kwiinkqubo eziqhelekileyo. Kukho imfuneko yokuba nolwazi olwaneleyo kwezi zihlaselo. Ukhuseleko lwewebhusayithi yakho kunye neyakhoabathengi baxhomekeke ekusebenzeni kwamanyathelo anjalo. Unokufunda indlela abahlaseli baphumelela ngayo ukungena ngokusebenzisa le khokelo.